Yini i-Agency Agency: Izinhloso, izibopho zentela nemali engenayo | Ezezimali Zomnotho
UClaudi Casal | | Umnotho jikelele, Izintela
Izikhathi eziningi sizwa nge-Tax Agency, uMgcinimafa, izintela, njll. Imininingwane emibi ngaye cishe njalo ifinyelela kithi futhi idala ukwesaba emakhaya amaningi eSpain. Lokhu kungenxa yokuthi kunjalo umzimba wombuso ophethe ukuqoqa intela. Ukuchaza kafushane ukuthi yini i-Tax Agency: Yinhlangano eyenza ukuthi sikhokhe intela.
Yize idumela layo elibi, i-Agency Agency noma ezezimali kuyadingeka ukugcina izwe lintanta ukuze likwazi ukuqhubeka nokuthuthuka. Uma unesithakazelo kulesi sihloko futhi ufuna ukuzazisa kahle ngaleli bhizinisi, ngincoma ukuthi ufunde le ndatshana.
1 Izinhloso ze-Agency Agency
2 Izibopho zentela zezinkampani nabasebenza ngokuzimela
3 Isitatimende semali engenayo
Izinhloso ze-Agency Agency
Inhloso eyinhloko yohlelo lwentela yanoma yiliphi izwe ukuqoqa izintela ukuze kwaneliswe zonke izidingo zomphakathi wonkana. Lokhu kwenziwa ngezinsizakalo eziyisisekelo ezisezindaweni ezahlukahlukene ezinjengezemfundo, ezempilo, ezokuthutha, ezokuxhumana, njll. Ngamanye amazwi: intela ekhokhwa yizakhamizi ukugcina ukunakekela isimo sezomnotho nezwe ngokusebenzisa ingqalasizinda ehlukile eyakhiqizayo.
Ngakho-ke, kunemisebenzi eminingi engaphansi kwemisebenzi ye-Agency Agency. Okulandelayo sizobona uhlu lwezinto ezivelele kakhulu:
Ukuhlolwa, ukuqoqwa kanye nokuphathwa kwezintela ezihambelana nobunikazi bombuso. Lokhu kufaka intela yomuntu siqu (intela yomuntu siqu engenayo), intela engenayo yokuhlala, izinkampani, intela ekhethekile kanye ne-VAT (intela eyengeziwe)
Imisebenzi ehlukahlukene ehlobene ne- Imali engenayo yamadolobha nemiphakathi ezimele.
Ukuqoqwa kwemali engenayo ye-European Union.
Ukusebenzisana ekushushiseni ubugebengu obuthile, njengalezo ezihlobene noMgcinimafa Kahulumeni noma ukushushumbisa.
Ukuqoqwa kwesikhathi sokuzithandela se Amarates angaphansi koMkhakha Kahulumeni Kahulumeni.
Kunoma ikuphi, kunemigqa emibili yokusebenza eyenziwe yi-Agency Agency esebenza ukufeza izibopho zentela zomuntu ngamunye noma ibhizinisi. Okokuqala, banikela ngosizo nezinsizakalo zolwazi kumkhokhi wentela. Ngale ndlela banciphisa izindleko ezingaqondile. Ngokolunye uhlangothi Bathatha izinyathelo ezahlukahlukene zokulawula ukuthola ukwephulwa kwentela.
Izibopho zentela zezinkampani nabasebenza ngokuzimela
Namuhla, noma yimuphi umsebenzi wezomnotho eSpain kufanele ukhokhe intela. Ngakho-ke, abasebenzela ezomnotho, okungukuthi, abazisebenzelayo kanye nezinkampani, baphoqelekile ukuthi babhalise kwi-Tax Agency lapho bezoqala umsebenzi. Le registry ifaka ukumenyezelwa okuvamile kwezinye izintela ezifana nentela yomuntu siqu engenayo, intela yenhlangano, i-VAT nezinye izintela ezengeziwe.
Futhi, Omunye umsebenzi we-Tax Agency ukwengamela ukubhalwa kwama-invoice ezinkampani nabasebenza ngokuzimela ezingeni lezezimali. Ngokusobala, kufakwa ukulawulwa kwentela okukhethekile. Lokho kusho ukuthi: Zombili izinkampani nabasebenza ngokuzimela kumele balandise ngayo yonke intela abayitholayo ekukhokhisweni kwabo. I-Agency Agency inikeza imininingwane yentela kubenzeli bezomnotho. Isibonelo salokhu izifanekiso zama-invoyisi nokuqukethwe kwawo. Iphinde inikeze imininingwane ngezintela ezahlukahlukene zomuntu siqu nezemibuso ye-VAT, ngoba lezi ezimbili zinomthelela obalulekile endleleni izinkampani nabazisebenzayo abakhokha ngayo intela.
Isitatimende semali engenayo
Indlela ejwayelekile yokukhokha intela yisakhamuzi noma umkhokhi wentela ngesitatimende semali engenayo. Ngalesi sizathu, kubaluleke kakhulu ukwazi imibhalo edingekayo okumele yethulwe kwi-Agency Agency. Futhi, kuyasiza ukwazi ukuthi yini engadonswa nokuthi yini engaphansi kokudonswa. Kukhona namathuba okudonswa kwemali okukhokhwa ngumkhokhintela angakusebenzisa ngokuya ngesimo. Akumele sikhohlwe ukuthi kunesikhathi esithile sokuphothula le nqubo okufanele siyilandele uma singafuni ukuba nezinkinga.
Ngenhlanhla manje sesinentuthuko enkulu kwezobuchwepheshe ehambisa, phakathi kokunye, ukuphathwa nokuphathwa kwazo zonke izinqubo zokuphatha ezibandakanyeka ezibophezelweni zentela. Isikhathi sedijithali siletha usizo oluningi nokufinyelela okwengeziwe kulwazi kanye nokuphathwa kwazo zonke izinqubo. Ngisho ne-Agency Agency isebenzise leli thuba, isebenzisa insiza yokuxhumana. Le ngosi inikeza lonke ulwazi mayelana nezinqubo okufanele zenziwe nokuthi kufanele zenziwe kanjani. Singayithola kuwebhusayithi esemthethweni ye-Tax Agency.
Olunye usizo le nhlangano elisinika lona kusuka kusayithi lalo eliku-inthanethi ukufinyelela ngqo ekuxazululeni ukungabaza. Lapho baphendula yonke imibuzo ephathelene nokukhokha intela. Lokhu kwenza lula kakhulu ezinye izinqubo ezingabonakala zinzima kakhulu ngenxa yokushoda kolwazi. Ngaphezu kwalokho, banikela ngenketho yokwenza ukuqokwa kwangaphambili ukuze bakwazi ukufaka isitatimende semali engenayo.
Ngiyethemba ukuthi le ndatshana ibilusizo kuwe ukuthola ukuthi yini i-Agency Agency.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Izintela » Yini i-Agency Agency